Mariin dhimma Finfinneerratti mari’aachuuf waamame hafe -
(bbcafaanoromoo)—Mariin dhimma faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinnee irraa argatuu malu irratti koreelee dhaabbii dhimma seeraa fi dhimma misooma magaalaa mana maree bakka bu’oota uummataan waamamee ture hafee jira.
Miseensa mana maree bakka bu’oota uummataa kan ta’an Obbo Araggaa Suufaa BBC’tti akka himanitti, mariin kun kan hafe miseensonni naannoo Oromiyaa bakka bu’uun mana maree bakka bu’oota uummataa keessa jirani fi namoonni dhimmichi na ilaallata jedhanii walgahii kana irratti argaman mormii dhageessisanii.
Labsiin dhimma faayidaa addaa kun bara 2009 wayita mana mareef dhiyaatu, dursa bal’inaan abbaa dhimmaa kan ta’e uummatni Oromoo akka irratti mari’atu kallattii jedhutu kaa’amee akka ture kan yaadatan Obbo Araggaan, ammas gaaffilee hirmaattonni maricha kaasaniin dhimmichi yeroo biraaf akka darbu murtaa’eera jedhu.
Gaaffileen hirmaattonni kaasanis, “uummanni keenya buqqa’ee jiraa. Ijoolleen beelaan harkatti rakkataa jirtii. Kuun dhumaa jiraa waan ta’eef sammuu tasgabbaa’een yeroo fudhannee ilaaluu qabna. Ammatti wanti nama ariifachiisu hin jiru,” kan jedhu ta’uu dubbatu.
Manni guutuun ejjennoo kanaan waan mormeef koreen marii kana waamees marichi yeroo biraaf akka darbu murteesseer, jedhu Obbo Araggaan.
Marii kana hogganuuf Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan biraatii irraa qondaaltonni kan argaman yoo ta’u, aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu’uun marii kana hogganuuf dhufan hin turre jedhu.
Ajjeechaa raayyaan ittisa biyyaa Mudde 11 Calanqootti raawwatee dabalatee rakkoolee nageenyaa biyyattii keessatti mul’achaa jiran irratti Ministirri muummee biyyattii ibsa akka kennan gaaffii dhiyaateen booda, manni marichaa hojiirra hin turre kan jedhan Obbo Araggaan Magarsaa, mariin kun waamamuu miidiyaa irraa akka dhagaahan dubbatu.
Dhimmootni gurguddoo mariin kun akka hafu taasisan lama kan jedhan, miseensi mana maree biraa BBC’n dubbise obbo Andaarsaan, tokko uummatni dursee irratti mari’achuu dhabuu lammaffaan ammoo ammatti dhimmoonni ariifachiisoo biroo jiraachuu isaati jedhu.
Kanaaf koree irraa akka deebiitti kan kenname, marii kana booda uummata mariisisuu wanti dhorku hin jiru kan jedhu ta’us, mormii cimaan waan ka’eef marichi guyyaa hin murtoofneef dheerachuu isaa dubbatu.
Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Aaddisuu Araggaa wayita ammaa kanatti dhimmi dantaa addaa Finfinnee dhimma mootummaan naannicha dursa kennuuf miti jechuun fuula fesbuukii isaanii irratti barreessanii turan.